ကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုလုံး အမည်းရောင် ဝတ်စုံကို ခြုံထားပြီ။ ဒါပေမယ့် လမ်းဘေးမီးတိုင်တွေ မော်တော်ကားမီးတွေ အဆောက်အအုံတိုင်းက လျှပ်စစ်မီးတွေကြောင့် အပြင်မှာ ထိန်ထိန်လင်းနေသည်။ ကြယ်တစ်လုံးမှ မရှိသော အဖော်မဲ့ကောင်းကင်ကြီးကို ကြည့်ပြီး အခန်းပြတင်းပေါက်ကို စိတ်မပါလက်မပါ ကျွန်မ လှမ်းပိတ်လိုက်သည်။ တစ်ကိုယ်လုံးကိုက်ခဲနေပြီး မအီမသာကြီးဖြစ်နေလို့ ဂွမ်းကပ်စောင်ကြီဲးခြုံပြီး ကွေးနေလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ငြီးငွေ့စရာကောင်းလှသော ကျွန်မ၏ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုကို တွေးတောနေမိသည်။ နံနက်လင်းသည်နှင့် အလုပ်သွား မှောင်တော့ပြန်လာ နောက်နံနက်ပြန်လင်းတော့ အလုပ်သွားနှင့် ပုံစံခွက်ထဲမှာ ချာချာလည်ပတ်နေသည်။ ကျွန်မ ဘဝကို အလုပ်ထဲမြုပ်နှံထားခဲ့တာ အတော်ကြာပြီဖြစ်သည်။ အမိမြန်မာမြေကို စွန့်ခွာပြီး ဒီကျွန်းနိုင်ငံလေးကို လာကတည်းက ကျွန်မဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပြီးသား။ ငွေတွေအများကြီး အများကြီး ရှာမည်ဟု။
ဒီနိုင်ငံလေးကို ကျွန်မစရောက်တော့ အိပ်မက်များ စိတ်ကူးများစွာဖြင့် ကျွန်မ မြူးကြွပျော်ရွှင်နေမိသည်။ သာမန်မြို့ငယ်လေးတစ်ခုမှ လာသော ကျွန်မအတွက် ဒီနိုင်ငံလေးမှာ မြင်တွေ့သမျှအရာရာအားလုံးဟာ မျက်စိစူးလောက်အောင် တောက်ပြောင်နေလွန်းသည်။ အဆင့်မြင့် shopping mall များ ၊၂၄ နာရီ ထိန်ထိန်လင်းနေသောလျှပ်စစ်မီး ၊ပြောင်လက်နေသောကြမ်းခင်း၊ မိုးထိမြင့်မားသော အဆောက်အအုံများ ၊အပန်းဖြေစရာနေရာများစွာက ကျွန်မ စိတ်အာရုံကို လွှမ်းမိုးထားသည်။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်မ စိတ်ထဲမှာ over time များများလုပ်ပစ်ပြီး ပိုက်ဆံတွေ ကုန်းရုန်းရှာမည်၊ ပြီးတော့ ကျွန်မလိုချင်တာတွေအားလုံး ရအောင်လုပ်မည်ဆိုတဲ့ အတွေးပဲ ရှိသည်။
အလုပ်မှာ ကျွန်မ အတိုက်အခံတွေ အများကြီး ကြုံရသည်။ ‘မြန်မာက လာတာ” ဟု ပြောလိုက်တိုင်း သူတို့အကြည့်တွေ စကားပြောဆိုပုံတွေ ပြောင်းသွားကြသည်။ ဒီအကြည့်တွေ ဒီအချိုးတွေက ဘာကို ဆိုလိုတယ်ဆိုတာ ကျွန်မကောင်းကောင်းကြီးသိတာပေါ့။ အလုပ်ကို သူတို့ထက်ပိုပြီး ကျွန်မ ကြိုးစားလုပ်တယ်။ အနားပေးတဲ့အချိန်မှာတောင် အနားမနေဘဲ အလုပ်အကြောင်း ပြိုင်ဖက်ကုမ္ပဏီ အကြောင်းသိအောင် ကျွန်မ အင်တာနက်ကို ကောင်းကောင်းအသုံးချသည်။ ကြိုးစားမှုကြောင့် ထိုက်သင့်တဲ့ ရာထူး လခတွေ တက်သည်။ တခြားနိုင်ငံကလာတဲ့လူတစ်ယောက်ကို ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေပေးတာကို သူတို့နိုင်ငံသားတွေက သိပ်မကျေနပ်ချင်။ ကွယ်ရာတစ်ဖုံ ကျယ်ကျယ်တစ်ဖုံ အတင်းပြောသည်…အားနည်းချက်ကို လိုက်ဟား..ဟာကွက်ကို လိုက်ထောက်ကြသည်။ ဝမ်းနည်းမှုတွေ သိမ်ငယ်မှုတွေကို ကျွန်မ မြိုသိပ်ရင်း အားတင်းထားခဲ့သည်။ ကြာတော့လည်း ဒါတွေအားလုံးကို ကျွန်မ မျက်နှာအရေခွံထူထူနဲ့ ပြုံးပြီး ကျွန်မကို ပြောနေတာမဟုတ်သည့်အတိုင်း နားထောင်တတ်နေပြီ။
ကျွန်မ မက်မက်မောမော တမ်းတလှပါသည်ဆိုသော ငွေ…အဆင်မြင့်မြင့်နေထိုင်မှု ..အဝတ်အစားလှလှတွေ..ဒေါက်ဖိနပ်မြင့်မြင့်တွေ..နောက်ဆုံးပေါ်လက်ကိုင်အိတ်တွေ အားလုံး ပိုင်ဆိုင်ပြီး အခုချိန်မှာတော့ ကျွန်မ ထင်သလောက် မပျော်ရွှင်တော့သည်မှာ အံ့သြစရာပင်။ လိုချင်တာတွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု ပိုင်ဆိုင်လာတဲ့အချိန်မှာ တစ်ကယ်တမ်း ကျွန်မ မပျော်ရွှင်ခဲ့ပါ။ တစ်ချိန်တုန်းက တောက်ပ ခမ်းနားသည်ဟု ထင်ခဲ့သည် အရာတွေအားလုံးက အခုချိန်မှာတော့ မှေးမှိန်နေသည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ ကျွန်မရဲ့ အသုံးအဆောင်တွေအပေါ် အထင်တကြီး အကြည့်တွေ အရင်ကခုံမင်သာယာခဲ့သောလည်း အခုချိန်မှာ ကျွန်မအတွက် သိပ်ပြီး အဓိပ္ပါယ် မရှိတော့။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တချို့ရဲ့ ပျားသကာလို ချိုမြိန်တဲ့ စကားတွေ ချီးမွမ်းသံတွေက နားအမြင်ကပ်စရာဖြစ်လာသည်။
“အား ပူလိုက်တာ” ကိုယ့်နဖူးကိုယ် စမ်းကြည့်တော့ အဖျားတော်တော်တက်နေပြီ။ ခြေလက်တို့လေးလံစွာဖြင့် ပရာစီတမောကို ရေအေးတစ်ခွက်နဲ့ မော့ချပြီး ခုတင်ပေါ်ကို ခြေပစ်လက်ပစ်လှဲချပစ်လိုက်သည်။ ဂွမ်းစောင်ကို လှမ်းဆွဲခြုံပြီး ကျွန်မ အလုပ်ထဲက ကျွန်မနှင့် အခင်ဆုံးဟု ယူဆထားသည့် တစ်ယောက်ကို လှမ်း မက်ဆေ့ခ်ျပို့လိုက်သည်။
“hey, I was very sick. I am alone. ” L (ငါအရမ်းဖျားနေပြီ..အိမ်မှာလည်း ငါတစ်ယောက်တည်းပဲ)
တအောင့်လောက်နေတော့ မက်ဆေ့ခ်ျဝင်လာသည်။ မျှော်လင့်ချက်တကြီးကောက်ဖတ်လိုက်တော့…
“oh! Get well soon! J” (အို ဟုတ်လား..မကြာခင်နေကောင်းလာပါစေနော်)
ဖတ်ရင်းဖြင့် ကျွန်မ မျက်ရည်ဝဲလာသည်။ ဒါ မဟုတ်….ကျွန်မ မျှော်လင့်ထားတာ ဒါမဟုတ်။ ။
အံကို တင်းတင်းကြိတ်ပြီး ကျွန်မ ကြိုးစားအိပ်သည်။ အိပ်လို့ လုံးဝမရ။ လူးလှိမ့်ရင်း ကျွန်မရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ဆွေမျိုးဖြစ်တဲ့ ညီမလေးကို လှမ်းသတိရသည်။ ကျွန်မ ဒီိကို စထွက်လာတော့ ညီမလေးကလုံးဝမသွားစေချင်။ မိဘတွေ ထားသွားခဲ့တဲ့ အိမ်ဆိုင်လေးက ကျွန်မတို့ ညီမနှစ်ယောက် အတွက် တစ်ဝမ်းတစ်ခါးတော့ စားလောက်သည်။ ခေါင်းမာလွန်းတဲ့ ချမ်းသာချင်လွန်းတဲ့ ကျွန်မက နိုင်ငံခြားကို ထွက်လာခဲ့ပြီး ညီမလေးကတော့ မိဘတွေ ထားခဲ့တဲ့ အိမ်မှာပဲ အိမ်ဆိုင်လေးကို စောင့်ရှောက်ရင်း နေရစ်သည်။ နှစ်စဉ်ကျွန်မ ညီမလေးဆီ မပြန်နိုင်ပေမယ့် နှစ်ဝက်တိုင်း ငွေလှမ်းပို့နိုင်အောင်တော့ ကျွန်မ ကြိုးစားသည်။ ညီမလေးကို တွေးရင်း အတိတ်က အဖြစ်အပျက်တစ်ခုက ခေါင်းထဲမှာ ဝေဝေဝါးဝါးပေါ်လာသည်။
ငယ်ငယ်က ကျွန်မတို့ အိမ်မှာ တီဗွီမဝယ်နိုင်။ ညနေစောင်းတိုင်း ကျွန်မက ကျွန်မညီမလေးလက်ကို ဆွဲရင်း နှစ်အိမ်ကျော်က သူဌေးအိမ်မှာ တီဗွီသွားကြည့်နေကျ။ အဲဒီအိမ်မှာ ကျွန်မ ညီမလေးနဲ့ အရွယ်တူ ကလေးမလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ တစ်ဦးတည်းသော သမီးလေးလည်းဖြစ် သူဌေးသမီးလဲ ဖြစ်ဆိုတော့ ကောင်မလေးက စွာကျယ်စွာကျယ်နိုင်သည်။ အဲဒီတုန်းကတော့ တီဗွီကြည့်ချင်သည့်ဇောဖြင့် ကျွန်မ အဲဒီကလေးမ ပြောသမျှ သည်းခံသည်။ တနေ့..ကျွန်မနဲ့ ညီမလေး သူတို့ တီဗွီရှေ့မှာ ကြုံ့ကြုံ့လေးထိုင်ရင်း တီဗွီကြည့်နေတုန်း ကလေးမလေးက မပြောမဆို ကျွန်မ ပေါင်ကို လာကုတ်ဆွဲသည်။ ဒေါသတကြီးဖြင့် ကျွန်မ အဲဒီကလေးမကို ဘုကြည့်ကြည့်ရင်း နင်ဘာလို့ ငါ့ကို ကုတ်ဆွဲတာလဲ လို့ ပြန်အော်လိုက်တယ်။ ကလေးမက ရုတ်တရက်ကြောင်သွားပြီးတော့ ဆက်ပြီး ထပ်ခါ ထပ်ခါ ကုတ်ဆွဲသည်။
ကျွန်မ ပေါင်မှာ အနီရောင်အစင်းကြောင်းတွေ ထင်ကုန်သည်။ ညီမလေးက မြင်တော့ ငိုပြီး ကလေးမလေး လက်ကို ဆွဲဖယ်ပြီး နင်ငါ့အစ်မကို ဘာလို့ ကုတ်တာလဲ ဟု အသားကုန်အော်သည်။ ကလေးမလေး အမေရောက်လာပြီး ကျွန်မပေါင်မှ အစင်းကြောင်းတွေကိုမှ ဂရုမစိုက် ကျွန်မတို့ကို လှမ်းအော်သည်။ “ဟဲ့.ဟဲ့...ညည်းတို့က သူများအိမ်မှာလည်း လာပြီး တီဗွီကပ်ကြည့်သေး ငါ့သမီးလည်းအော်သေး ဘယ်နှယ့်ဟာမလေးတွေလဲ အခုချက်ချင်း ထွက်သွား”။ ကျွန်မ ညီမလေးလက်ကို ဆွဲပြီး ချက်ချင်း အဲဒီအိမ်မှ လှည့်ထွက်ခဲ့သည်။ လှေကားတွေကို တစ်ထစ်ပြီး တစ်ထစ်ဆင်းတုန်းက ကျွန်မခံစားခဲ့ရတဲ့ ထိတ်လန့်မှု အံ့သြမှု ရှက်ရွံ့မှုတွေကို ကျွန်မ လုံးဝ မမေ့သေး။ အဲဒီကတည်းက ကျွန်မ တေးမှတ်ထားခဲ့သည်..သူတို့ထက်ပိုပြီး ချမ်းသာရမည်ဟု။ ။
မခေါ်ဖြစ်တာ အတော် ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို နှေးကွေးစွာ နှိပ်နေတုန်း ကျွန်မဆီ ဖုန်းဝင်လာသည်။ လှမ်းကိုင်လိုက်တော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ညီမလေးဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်မ သူ့ကို လိုအပ်နေသည့် အချိန် သူ့ဆီက ဖုန်းဝင်လာတော့ တော်တော်အားတက်သွားသည်။
--“ဟလို …ဟလို သင်းလား ”
“မမ..မမလား……နင်တအားနေနိုင်တယ် ဖုန်းတောင်မဆက်ဘူး..ငါ သတိရနေတာ.. အဲဒါနဲ့ ဖုန်းဆိုင်ကနေ နင့်ဆီကို လှမ်းခေါ်လိုက်တာ”
--“မခေါ်ဆို ..မအားဘူးဟ…အလုပ်သွားလိုက် အပန်းဖြေခရီးတွေ သွားလိုက်နဲ့…ဒီမှာ ပျော်စရာကြီးဟ” တုန်နေသော အသံကို ထိန်းရင်း ကျွန်မ လှမ်းပြောလိုက်သည်။
“ဟင် ပျော်တယ်ဆိုပြီး နင့်အသံကြီးက မတက်ကြွလိုက်တာ”
“ဆေးရော သောက်ပြီးပြီလား…ဆေးခန်းရောသွားလား…ဆန်ပြုတ်ကော လုပ်သောက်ရဲ့လား…နွေးနွေးထွေးထွေးရော ရှိရဲ့လား...တော်တော်ဖျားနေလား…ငါဘာလုပ်ပေးရမလဲဟင်”
တရစပ်မေးလိုက်သော မေးခွန်းတွေကြောင့် ကျွန်မ ရယ်ချင်သွားသည်။ ရင်ထဲမှာလည်းနွေးထွေးသွားသည်။ အတော်ကြာခဲ့ပြီ။ ကျွန်မအပေါ်လူတစ်ယောက်က ဒီလို ဂရုတစိုက်မေးခွန်းတွေ အမေးမခံရတာ..ဂ၇ုစိုက်မခံရတာ။ ကိုးရီးကားအလွန်ကြည့်သည့် သူမကို ကျွန်မက နောက်ချင်သည့် စိတ်ဖြင့်
--“ ငါ သွေးကင်ဆာ ရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ..ပါးစပ်ထဲက သွေးတွေ အန်တယ်”
တစ်ချက်တိတ်သွားပြီး သူမက “နင် …မသေရဘူး…နင့်ကို ငါ့ ရိုးတွင်းခြင်ဆီပေးပြီး ကယ်မယ်...နင့်အတွက် ငါတကယ် အသက်စွန့်နိုင်တယ်”
ရုတ်တရက် ကျွန်မ ဆွံ့အသွားသည်။ အငယ်ဖြစ်သော သူမပါးစပ်မှ ကျွန်မကို သူ့အသက်ပေးပြီး ကာကွယ်မယ်တဲ့။ ကျွန်မ မျှော်လင့်ထားသော အဖြေမဟုတ်တဲ့ သူမ အဖြေက ကျွန်မရင်ထဲကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း လှိုင်းခတ်သွားသည်။ ကျွန်မ သူမကို လှမ်းပြောလိုက်သည်။
--“ငါ ဒီအပတ်ထဲ ပြန်လာခဲ့မယ် သိလား..သင်း”
သူမက ဝမ်းသာအားရဖြင့် စကားတွေ တရစပ်ပြောသည်။ ဘာသံမှ ကျွန်မ သဲသဲကွဲကွဲ မကြားတော့။ အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာမှုဖြင့် ကျွန်မ ရှိုက်ကြီး တငင် ငိုချလိုက်သည်။ ။။။။
Posted by wa lay at 11:54:00 pm
ကျွန်မ သေသွားနိုင်တယ်လို့ ထင်မိတယ်။ ကျွန်မ ကောလိပ် ဒုတိယနှစ်ကို ရောက်နေပြီ။ ပထမနှစ်ကတည်း ချစ်ခဲ့တဲ့သူက ကျွန်မကို လမ်းခွဲစကားဆိုသွားတယ်လေ။ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ ကျွန်မ မသိတော့ဘူး။ ကျွန်မ အထက်တန်းထဲကနေ အခုထိ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ကျွန်မကို စွဲစွဲမြဲမြဲချစ်တဲ့သူ မရှိခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ယောက်က ကျွန်မအတွက် ထူးခြားတယ်။ ကျွန်မအသက် (၂၀) ပြည့်ပြီမို့ တည်ငြိမ်စွာ အချစ်ကို ရှာတွေ့ခဲ့ပြီလို့ ကျွန်မ ယူဆခဲ့တယ်။ အခုတော့ ကျွန်မ စိတ်တွေ ယောက်ယက်ခတ်ပြီး မအိပ်နိုင် မစားနိုင်ဖြစ်နေပြီ။ အခန်းဖော်တွေအားလုံးက ကျွန်မအတွက် စိုးရိမ်နေပေမယ့် ကျွန်မစိတ်ကို ပြောင်းလဲဖို့ အမျိုးမျိုး သူတို့ ကြိုးစားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ လက်လျှော့သွားကြပြီ။ ကျွန်မနဲ့ သူစိမ်းတရံလို ဖြစ်နေတဲ့ ချစ်သူဆီကို ကျွန်မရဲ့ စင်ပေါ်မှာ အခုထိရှိနေသေးတဲ့ အရုပ်ဟောင်းလေးအကြောင်းကို ကဗျာလေးရေးပြီး ပို့တဲ့အထိ ကျွန်မရူးခဲ့တယ်။ နုနယ်သေးတဲ့ ကျွန်မ နှလုံးသား သိပ်အထိနာခဲ့တယ်လေ။
လမ်းခွဲပြီးနောက် နေ့စဉ်လိုလို စာနာနှစ်သိမ့်သံတွေ ကြားရဖို့ အမေ့ဆီကို ကျွန်မ ဖုန်းခေါ်ခဲ့တယ်။ အဖေနဲ့ ကျွန်မကတော့ ပုံမှန်သားအဖစကားဝိုင်းအတိုင်းတနင်္ဂနွေနေ့မှာ ဖုန်းပြောဖြစ်ကြတယ်။ ကျွန်မ စာကြိုးစားနေကြောင်းနဲ့ ပိုက်ဆံအလုံအလောက်ရှိတဲ့အကြောင်း ယုံကြည်အောင် အဖေ့ကို ပြောခဲ့တယ်။ တစ်ဖက်မှာတော့ အမေနဲ့ ကျွန်မ အမှန်တကယ်ကို နှလုံးသားချင်းဖလှယ် စကားပြောခဲ့တယ်။ အမေကတော့ ကျောင်းမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေ၊ အတန်းထဲမှာ ကျွန်မသင်ရတဲ့ သင်ခန်းစာတွေ၊ ကျောင်းက ကဖေးမှာ ဘာတွေကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အထိ ကျွန်မနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးကို သိချင်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မနဲ့အမေ ဖုန်းပြောကြတာ ဖုန်းဘေလ်တွေ သာမန်မဟုတ်တဲ့အထိ ထိုးတက်လာတာပဲ။ ကျွန်မ အမေက “တစ်ခြားယောက်ျားတွေလည်း အများကြီးပါ”လို့ ပြောမှာကို ကျွန်မစောင့်မျှော်နေခဲ့ပေမယ့် သူမက တစ်လုံးမှ မပြောခဲ့ပါဘူး။ အမေက ကျွန်မရဲ့ ဝမ်းနည်းမျက်ရည်တွေအတွက် အရမ်းကို စာနာနားလည်တတ်ပြီး သည်းခံတတ်တဲ့သူပါ။ ဒါပေမယ့် အပတ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ သူ့ကို တမ်းတမ်းစွဲစွဲဖြစ်နေသေးတဲ့ ကျွန်မကို ရူးနေပြီလို့ ပြောလာတယ်။ သူမ မှန်တယ်ဆိုတာ ကျွန်မသိတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်မရဲ့ ကွဲအက်နေတဲ့ နှလုံးသားကို စာအုပ်တွေကြားထဲမှာ အရင်ကထက်ပိုပြီး မြှုပ်နှံဖို့ ကျွန်မ ကြိုးစားတယ်။ ပြီးတော့ ကောလိပ်က အဖွဲအစည်းတော်တော်များများကို ကျွန်မ ဆက်သွယ်ပြီး ပါဝင်လှုပ်ရှားတယ်။ အဖေကတော့ ကျွန်မ ရည်းစားနဲ့ကွဲတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်ခွန်းမှ မဟခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်မခံစားရတဲ့အတွက် အဖေလည်း ကျွန်မအတွက် စိတ်မကောင်းဘူးဆိုတာ ကျွန်မသိတယ်။ အဖေက ပုံမှန်အားဖြင့် အမေကို နှစ်သိမ့်အားပေးနေကျလေ။
တစ်နေ့ နေ့လယ်အတန်းပြီး ကျွန်မအခန်းကို ပြန်လာတော့ အခန်းဖော်က ကုလားထိုင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီး ကျွန်မကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲပြုံးပြီး ကြည့်နေတယ်။ အခန်းရဲ့အလယ်က စားပွဲပေါ်မှာတော့ အရောင်ဖျော့ဖျော့ လှပလှတဲ့ ပန်းခြင်းလေးကို တွေ့လိုက်တယ်။
“နင့်အတွက်” လို့ အခန်းဖော်က ပြောတော့ ကျွန်မ နှလုံးခုန်ရပ်သွားတယ်။ ဒါပဲ ဖြစ်ရမှာပေါ့။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ကျွန်မချစ်သူက သူ့အမှားတွေကို သိပြီး ကျွန်မဆီပြန်လာတာ ဖြစ်မယ်။ သူဦးဆောင်ပြီး ဂိုက်လုပ်ပေးတဲ့ ဂျူနီယာအဖွဲ့ထဲက ဘာဘီလေးလိုချောတဲ့ ဂျူနီယာကောင်မလေးကို သူ တစ်ကယ်ချစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မ ဖြည်းဖြည်းချင်းရှေ့တိုးသွားပြီး မွှေးပျံ့လှတဲ့ ပန်းခြင်းလေးကို မ လိုက်တယ်။ အထဲက ကဒ်လေးကို တုန်ယင်နေတဲ့လက်တွေနဲ့ ဖတ်လိုက်တယ်။ ရိုးရိုးလေးရေးထားတာလေးက “နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကြာအောင် ချစ်မြတ်နိုးခဲ့သော တစ်ယောက်တည်းသောသူဆီမှ” တဲ့။ ကျွန်မ မျက်ဝန်းအိမ်တွေမှာ မျက်ရည်တွေ တမုဟုတ်ချင်း အိုင်လာတယ်။ အခန်းဖော်ကတော့ ဝေခွဲမရစွာ ကျွန်မကို ကြည့်ဆဲ။
“အဲဒါ အဖေ့ဆီက” ဆို့နင့်စွာ ကျွန်မ ရှင်းပြပြီး ပန်းလေးတွေကို ညင်ညင်သာသာလေးကိုင်ဖို့ ကျွန်မ ထိုင်ချလိုက်ပြီး နူးညံ့လှတဲ့ ပွင့်ဖတ်လေးတွေကို စိုက်ကြည့်နေမိတယ်။
“နင့်အဖေ ဟုတ်လား…ဘာအတွက်လဲ” ပြောပြောဆိုဆို အခန်းဖော်က ကျွန်မနားမှာ လာထိုင်ပြီး ကျွန်မကို သိုင်းဖက်လိုက်တယ်။ ကဒ်လေးကို သူမဆီပေးတော့ သူမက ထပ်ပြုံးပြီး ပြီးတော့ “နင့်အဖေက သိပ်ကို နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတာပ”ဲ လို့ ပြောလိုက်တယ်။ နှာကို ရှုံ့ရင်း “အင်း ဟုတ်တယ်” လို့ ကျွန်မ ပြန်ပြောမိသည်။ အမေ့ဆီက ရနေကျ အားပေးသံ နှစ်သိမ့်သံတွေက ကျွန်မရဲ့ နှလုံးသားဖြည်းဖြည်းချင်း အနာကျက်လာဖို့ အကူအညီပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အဖေ့ဆီကရလာတဲ့ ပန်းခြင်းလေးကတော့ ကျွန်မရဲ့ နှလုံးသားကို လုံးဝအနာကျက်ဖို့ နှစ်သိမ့်အားပေးလိုက်တာပါ။
နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ကျွန်မ ပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုကို ထူထောင်ခဲ့ပြီး ကလေးတစ်ယောက်တောင် ရနေပါပြီ။ မကြာသေးတဲ့ နှစ်များအတွင်းမှာ အဖေကတော့ ဘဝတိုက်ပွဲကို တိုက်နေရပါတယ်။ ယိုယွင်းလာတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပင်စင်ယူဖို့ ဝိုင်းပြီး တိုက်တွန်းခံရတဲ့အထိပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဖေတစ်ယောက်ရဲ့ မိသားစုကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့ ခမ်းနားတဲ့ ပုံရိပ်ကတော့ ဘယ်တော့မှ ပျောက်ပျက်မသွားပါဘူး။ အဖေတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်ဟာ သားသမီးတွေအတွက် သူဘာတွေ ပေးဆပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ပြသနိုင်တဲ့ သင်္ကေတတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ သားသမီးတွေအတွက် ကြီးမားခိုင်ခံ့တဲ့ ခံတပ်ကြီးသဖွယ် အဖေ့ရဲ့ အရည်အချင်းတွေ၊ အဖေ့ရဲ့ စံပြအမူအကျင့် ယုံကြည်ချက်တွေရဲ့ စွမ်းအားတွေကို အဖေ ကျန်းမာရေးထိခိုက်လာတဲ့အခါမှ သဘောပေါက်နားလည်မိတာပါ။ အမေက အဖေဟာ သူ့ဘဝအခုလို ချွတ်ခြုံကျနေပေမယ့် လုံးဝမညည်းတာ၊ သူဘယ်လောက် ခံစားနေရပေမယ့် ထုတ်ဖော်ပြောမပြတာတွေ ကျွန်မကို ခဏ ခဏပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့နဲ့အတူ ကျွန်မတို့အတွက် ထပ်ပြီး ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်တာတွေအတွက် သူအရမ်းဝမ်းနည်းနေပါတယ်။
ကျွန်မ အဖေ့ကို အခုလိုဘာမှလုပ်မပေးနိုင်တော့တာဟာ အဖေကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးဆိုတာကို ပြောပြချင်မိတယ်။ အဖေနဲ့ အတူ ကျွန်မ ခရီးထွက်ဖြစ်တယ်။ အဖေက ကျွန်မကို ပေးခဲ့တဲ့ စိတ်ခွန်အားဖြည့် အခြေခံအုတ်မြစ်တွေ ထောက်ခံမှုတွေက ဘယ်တော့မှ အားနည်းယုတ်လျော့မသွားတဲ့ အပြင် ပိုပြီး ကျွန်မကို အားဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့ ရည်းစားဟောင်း၊ ကျွန်မ အသည်းကွဲခဲ့တာ၊ အဖေ့ရဲ့ ပန်းခြင်းလေး အဲဒါတွေအားလုံးကို ကျွန်မ မေ့လျော့နေခဲ့ပါပြီ။ အယ်လ်ဘမ်ဟောင်းလေးကို ကျွန်မတွေ့တော့ ဓာတ်ပုံတစ်ခုက ကျွန်မရဲ့ အဲဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မှတ်ဥာဏ်ကို ပြန်လည်တူးဖော်ပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက အဖေ့ရဲ့ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ အပြုအမူပေါ် ကျွန်မရဲ့မျက်ဝန်းတွေ မျက်ရည်တွေ စိုစွတ်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီနေ့က အဖေများနေ့မတိုင်ခင် တစ်ပတ်အလိုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျွန်မ တစ်စုံတစ်ရာလုပ်ဖို့ အကြံရခဲ့တယ်။
အဖေက ဖျော့လျော့တဲ့ အပြုံလေးနဲ့ ကတ်လေးကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ ပန်းလေးတွေကို လက်ဆောင်အဖြစ် နှစ်သက်ခဲတဲ့ လူစားမျိုးပေမယ့် ဒီပန်းလေးတွေက သူ့ကို အံအားသင့်စေတယ်။ ကတ်လေးထဲမှာ ရေးထားတာကတော့ “မွေးကတည်းက ချစ်လာခဲ့တဲ့ တစ်ယောက်တည်းသောသူဆီမှ တဲ့”။
ကျွန်မ အဖေ့ကို ဖက်လိုက်ပြီး ညင်ညင်သာသာလေး မေးလိုက်တယ်။ “မှတ်မိသေးရဲ့လား”လို့။
“မှတ်မိသေးတယ်”လို့ အဖေက ကျွန်မကို ညင်ညင်သာသာလေးပြောပြီး ကျွန်မတို့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ကြည့်ရင်း ခေါင်းညိမ့်ကြတယ်။ ခါတိုင်းလိုပဲ စကားလုံးတွေ မလိုအပ်ပါဘူး။
“Chicken Soup for the Soul (Thanks Dad)” မှ “Heidi Durig Heiby” ၏ “From the Only” ကို ဘာသာပြန်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းစာ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ပျက်ပြားစေပါက ကျွန်မ၏ အားနည်းချက်သာ ဖြစ်ပါသည်။
သူငယ်ချင်းများအားလုံး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ =)
Posted by wa lay at 1:23:00 am
လေပြေလေညှင်းက တဖြတ်ဖြတ်နှင့် ဖြေးညင်းစွာ တိုက်ခတ်နေသည်။ လေပြေလေညှင်းများရဲ့ အလိုအတိုင်း သူမရဲ့ ဆံနွယ်များက တဖြတ်ဖြတ် စကတ်အစွန်းများက တဖြတ်ဖြတ် လှုပ်ရှားနေသည်။ အသက်တစ်ဝကြီး သူမ ရှူလိုက်သည်။ နှာခေါင်းဝမှာ တိုးဝင်သွားတဲ့ လတ်ဆတ်တဲ့လေကို တမေ့တမောရှူရှိုက်ရင်း သူမ နှုတ်ခမ်းဒေါင့်များ ကွေးတက်သွားသည်။ဘေးဘီကို ကြည့်လိုက်တော့ မျက်စိတစ်ဆုံး ဝါဝါဝင်းနေတဲ့ ပန်းမွေ့ရာကြီး။နေရောင်ဖျော့ဖျော့အောက်မှာ သူတို့တွေပုံစံက ပြုံးရယ်နေသယောင်။ စိတ်ကြည်နူးစရာကောင်းလိုက်တာ။ သူမ လက်နှစ်ဖက်ကို ဖြန့်ကျက်ရင်း ပတ်ချာလှည့်လိုက်သည်။နူးညံ့သော နေကြာပန်းများ၏ အထိအတွေ့က သူမကို ပြုံးရယ်စေသည်။ ဘယ်လောက် ကဗျာဆန်ပြီး မှော်ဝင်တဲ့ ညနေခင်းလေးပါလိမ့်။ သူမ သူ့ဘက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ သူက သူမကို တစ်ချက်ကြည့်ရင်း မျက်နှာလွှဲကာ လတ်ဆတ်သောလေကို တယုတယရှုလိုက်သည်။
အကြော်ဆိုင်လေးမှာ စောင့်နေသော သူ့ကို တွေ့တော့ သူမ မပြေးရုံတမယ် ခြေလှမ်းသွက်သွက်လှမ်းမိသည်။ ဒီသတင်းကောင်းကို ချစ်ရသူ သူ့ကို သူမ ပြောပြချင်စိတ်အရမ်းစောနေသည်။
“မောင်ရေ မောင်…မောင်….ဒီနေ့ ဘာဖြစ်လာလဲ သိလားဟင်”
“ဟား…… ခြူးက ဘာဖြစ်လာလို့လဲ”
“ဒီနေ့လေ ရုံးမှာ သူဋ္ဌေးက ခြူးကို ရာထူးတိုးပေးလိုက်ပြီ သိလား အဲဒါလေ ခြူးကို လူတွေက အားကျနေတဲ့မျက်လုံးနဲ့ ကြည့်နေကြတာများ မောင့်ကို မြင်စေချင်တာ”
“အော်…ကောင်းတာပေါ့ ခြူးရဲ့ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း” ပြုံးရင်း သူ ဆိုလာသည်။
“ဒါနဲ့ ခြူးဘာစားချင်လဲဟင် ဗိုက်ဆာနေရောပေါ့”
“ခဏနေပါအုံး မောင်ရဲ့ အဲဒါလေ ခြူးတို့ရုံးက ခြူးကို လိုက်ပြိုင်နေတဲ့ မြင့်မြင့်ဝေဆိုတာ မောင်သိပါတယ် သူဆို ခြူးကို မခံချိမခံသာ အပြုံးနဲ့ ကပ်ဖားနေရပြီ မောင်ရဲ့ အခု သူဋ္ဌေးက ပေးအပ်ထားတဲ့ စီမံကိန်းမှာ ခြူးက ပါးပါးနပ်နပ်ဆောင်ရွက်နိုင်လို့တဲ့လေ…အဲဒီတုန်းက ခြူးမှာ ခေါင်းစားလိုကိရတာ မောင်ရယ်…အခက်အခဲတွေကလည်း….”
“ခြူးရေ…အဲဒါတွေက ပြီးသွားပြီလေ အခုအချိန်က ကိုယ်တို့ ချိန်းတွေ့နေကြတာလေ အချိန်လေးတွေကို တန်ဖိုးရှိရှိနဲ့ ကုန်ဆုံးရအောင်နော်”
သူမ စိတ်ထဲ တစ်ခုခုနဲ့ ဆောင့်မိသလို အောင့်ခနဲဖြစ်ပြီး အခံရခက်သွားသည်။ သူ သူမအတွက် ဝမ်းမသာဘူးလား။ သူမအတွက် သူစိတ်ရှည်ရှည်ထားမပေးနိုင်ဘူးလား။ သူ့အတွက် “အော်…ကောင်းတာပေါ့ ခြူးရဲ့ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း” ဆိုတဲ့ ဝတ်ကျေတန်းကျေစကားတွေ အစား ဒီ့ပြင် ဘာထူးထူးခြားခြားစကားမရှိတော့ဘူးလား။ သူမ ဒီစီမံကိန်းအတွက် ဘယ်လောက် ကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာ သူမသိဘူးလား။ ထိုညနေမှာတော့ သူက စကားတွေ တတွတ်တွတ်ပြောနေသလောက် သူမ အသာငြိမ်နေမိသည်။
“ခြူးရေ ခြူးအတွက်” ပန်းစည်းလက်ဆောင်ကို ပေးရင်း သူဆိုလာသည်။ နှင်းဆီပန်းဝါဝါလေးတွေကို တရှိုက်တမက်ရှူရင်း သူမ ပြုံးမိသည်။ သူမရဲ့ မွေးနံ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ရောက်တိုင်း သူမကို နှင်းဆီပန်းအဝါရောင် တစ်စည်းကို မပျက်မကွက် လက်ဆောင်ပေးတတ်သည်။ သူ့ကို သူမ ချစ်မိသွားတာတွေထဲမှာ အဲဒါတွေပါတာပေါ့။ သူက မြတ်မြတ်နိုးနိုးဖြင့် ယုယတတ်သည်။
သူက သူမလက်ကလေးတွေကို တယုတယဆုပ်ကိုင်ရင်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို တမေ့တမောကြီး ကြည့်နေသည်။ ကဗျာဆရာဆန်စွာ ပန်းလေးတွေ ဘယ်လောက်လှကြောင်း ငှက်ကလေးတွေ ထပျံသွားတာ ဘယ်လောက်လှကြောင်း ဖွဲ့နွဲ့ပြောနေတတ်သည်။ သူမအတွက် ဘာမှ မဟုတ်သည့်အရာလေးတွေက သူ့အတွက် အံ့သြစရာကောင်းအောင် လှပနေသည်။
အဲဒီနေ့က သူ သူမကို လက်ထက်ခွင့် တောင်းလာသည်။ အနောက်တိုင်းကားများထဲကလို သူမအား ဘယ်လက်သူကြွယ်မှာ လက်စွပ်စွပ်ပေးရင်း မြတ်မြတ်နိုးနိုး လက်ထပ်ခွင့်တောင်းလာခြင်းဖြစ်သည်။ ညနေစောင်းအချိန် ပန်းခြံက ခုံတန်းလေးပေါ်တွင် ချစ်ရသူက လက်ထပ်ခွင့်တောင်းလာခြင်းမှာ ဘယ်လောက် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ပါသလဲ။ သူမ ကြည်ကြည်နူးနူးဖြင့် ခေါင်းညိမ့်ခဲ့သည်။
နောက်ပိုင်း သူနှင့်သူမ၏ စကားဝိုင်းများထဲတွင် သူမက နောင်ရေးအတွက် ထည့်ပြီး ပြောသည်။
သူကတော့ အဲဒါတွေ ကြိုပြီးစဉ်းစားသည့် ပုံမပေါ်။ သူမက စိုးရိမ်ပူပန်စွာဖြင့် အိမ်တစ်အိမ်အမြန်ဝယ်ရန်ပြောတိုင်း သူ့ရဲ့ “မောင် ကြိုးစားနေတယ်” ဟူသော စကားမှ အပ သူမ ဘာမှ သေသေချာချာ မကြားရ။ ဒီလောက် ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ ဒီရေလိုတက်နေသော ခေတ်ကြီးတွင် လက်ထပ်ပြီးလျှင် အဆင်မပြေဖြင့် နေရမည့် ဘဝကို သူမ ကြောက်ရွံ့သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း အလျဉ်းသင့်သလို သူမ သူ့အား လောဆော်မိသည်။ သူမကသာလျှင် သူ့အား ဘဏ်စာအုပ်ထဲမှာ ငွေတွေစုထားဖို့ အိမ်ဈေးတွေ စုံစမ်းထားဖို့ အလုပ်ကို ပိုပြီးလုပ်ဖို့ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ ဘယ်လောက်ကြီးလာကြောင်း တတွတ်တွတ်ပြောနေသော်လည်း သူ့ဆီမှ “ ကြိုးစားနေတယ်” အပြင် သူမ စိတ်ကျေနပ်လောက်စရာ အဖြေမရခဲ့။ သူ့ဘက်မှ လည်း ထိုကဲ့သို့အရာတွေ စတင်မဆွေးနွေးခဲ့ ဘယ်တော့မှလည်း တွေးမပူခဲ့။ ကြာလာတော့ သူ့အား သူမကို တစ်ကယ်တန်ဖိုးထားတာများ ဟုတ်ပါလေစ ဟု သံသယဖြစ်လာလေပြီ။
သူမရဲ့ ဘဝမှာ အကြီးမားဆုံးအမှားကို သူမ ကျူးလွန်မိပြီဟု စတင်တွေးမိချိန်မှာတော့ သူမအတွက် အချိန်နှောင်းသွားပြီ။ သူမ သူ့ကို တစ်ကယ်ပင် ချစ်မိသွားပြီ။ သူက အရာရာကို အလေးအနက် မထားတတ်။ သူမထက်ငယ်လို့ အရာရာကို ပေါ့ပေါ့တန်တန်ဖြစ်နေသည် ဆိုလျှင်တော့ ဖြေသာလို့ရသေးသည်။ အခု သူက သူမထက် (၄) နှစ်တိတိကြီးသည်။ သူက သူမ လောက်ပင် လေးလေးနက်နက် ပူပူပန်ပန် အရှည်ကို မတွေးတတ်။ သူမလို အရာရာကို မျှော်တွေးကာ ပူပန်စဉ်းစားတတ်သောသူက သူ့လို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနေတတ်သော သူမျိုးကို ဘဝလက်တွဲဖော်အဖြစ်ထိရည်ရွယ်ကာ ချစ်ခဲ့သည်။ သူမရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကြားတိုင်း သူ အံ့သြမှုမပြခဲ့သလို သူမရဲ့ ကျရှုံးမှုတွေကြုံရတိုင်း သူကျေနပ်လောက်အောင် သူမအား နှစ်သိမ့်မှု မပေးခဲ့။ သူမဟာ သူ့အတွက် အပြင်လူလိုများ ဖြစ်နေပြီလား။ အခုတော့ သူမ သူ့ကို အရမ်း စိတ်ကုန်နေပြီ။
အခုဆို သူမ သူ့ကို မခေါ်မပြောဖြင့် စိတ်ကောက်တာ (၁) ပတ်ရှိတော့မည်။ သူ့ဖက်မှ သူမအား ပုံမှန်ဆက်သွယ်နေပါသော်လည်း သူမ ရှောင်ခဲ့သည်။ သူမ တစ်ကယ်ကို စိတ်ကုန်နေလေပြီ။ ထိုအပတ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ သူ့ဆီမှ နှင်းဆီပန်းစည်းကို သူမ မပျက်မကွက် လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ထိုထဲမှ စာတွင် သူ စနေနေ့နံနက်စောစောတွင် သူမအား တွေ့ရန် အိမ်အောက်တွင် စောင့်နေမည့်ကြောင်း ပြောထားသည်။
စနေနေ့တွင် သူမ အားတင်းပြီး သူ့အား ထွက်မတွေ့ရန် ဆုံးဖြတ်ထားသည်။
သူပြန်သွားပြီအမှတ်ဖြင့် နေ့လယ်ခင်းအချိန် သူမ အခန်းပြူတင်းခန်းဆီးမှ အပြင်လမ်းမပေါ်ကို ကြည့်လိုက်တော့ သူက ပန်းစည်းနှင့် သူမရှိရာ အခန်းသို့ မော်ကြည့်နေသည်။ သူမ ဆက်ပြီး တောင့်ခံနိုင်စွမ်းအား မရှိတော့။ သူ့ဆီကို အပြေးကလေးသွားတော့ သူက သူမအား ပန်းစည်းလက်ဆောင်ပေးရင်း တက်ခ်စီငှားရင်း သူနဲ့ လိုက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလာသည်။
တက်ခ်စ်ီပေါ်မှာ သူမ ငြိမ်လျက်သားပင် လိုက်ပါလာသည်။ သူရဲ့ အပြုအမူများကိုလည်း အံ့သြနေမိသည်။ သူမောင်းခိုင်းနေသည့် ဦးတည်ရာက သူမတို့နှစ်ယောက်သွားနေကျ အကြော်ဆိုင် ပန်းခြံတွေ မဟုတ်။ ရုတ်တရက် တက်ခ်စီက သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးဆောက်ထားသော ပျဉ်ထောင်အိမ်လေးနားမှာ တုန့်ခနဲ ရပ်သွားသည်။ သူမ ကားပေါ်မှ လှမ်းငေးကြည့်လိုက်တော့ အိမ်လေးက ရှေ့မှ ပန်းအိုးလေးများဖြင့် နေချင်စရာဖြစ်သည်။ သူ့ဘက်ကို လှည့်ကြည့်တော့ သူက သူမအား အကဲခတ်နေသယောင်ကြည့်ပြီး “အိမ်လေးက လှတယ်မလားဟင်” လို့မေးလိုက်တော့ သူမ ခေါင်းညိမ့်ပြလိုက်သည်။ သူမ ဖြစ်စေချင်နေတာ တစ်ခုခုများ ပြောမလား ဟူသော အတွေးဖြင့် သူ့ကို ကြည့်လိုက်သော်လည်း သူဘာမှ ဆက်မပြောတော့။
ထို့နောက် တက်ခ်စီဒရိုင်ဘာအား သူတစ်ခုခုကပ်ပြောပြီး ဆက်မောင်းစေသည်။ သူမ ပဟေဠိဆန်သော သူ့အပြုအမူတွေကို တွေးနေတုန်း ကားက မြို့အစွန် နေကြာပန်းခင်းနားမှာ ရပ်သွားသည်။
သူ နှင့် သူမ နေကြာပန်းခင်းတွေထဲ တိတ်ဆိတ်စွာ ဖြတ်လျှောက်လာသည်။ သူက ရုတ်တရက် သူမ ပခုံးနှစ်ဖက်ကို ခပ်တင်းတင်းကိုင်ပြီး လေးနက်တည်ကြည်သော အသံဖြင့်ဆိုလာသည်။
“ခြူးရေ မောင့်ကို မင်း အလေးအနက်ထားသူ မဟုတ်ဘူးလို့ စွပ်စွဲဖူးတယ်နော် မောင်ဟာ ခြူးရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို မနာလိုသူလို့လည်း ပြောဖူးတယ်နော် မောင်ဟာ ဘာကိုမှ တွေးမပူတတ်ဖူးဘူးလို့လည်း ခြူးပြောဖူးတယ် မောင့်ရဲ့ ခံယူချက်ကို ခြူးကို ရှင်းပြချင်တယ် လူတော်တော်များများဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ မရှင်သန်ကြဘူး ခြူးရဲ့ သူတို့ဟာ အနာဂတ်နဲ့ အတိတ်မှာပဲ တဝဲလည်လည်ဖြစ်နေကြတယ်၊ အနာဂတ်အတွက် တွေးပူကြတယ် ဒါပေမယ့် အနာဂတ်အတွက် တွေးပူနေရုံနဲ့ အနာဂတ်က လှပလာရောလား အတိတ်ကအရာတွေက ပြန်စားမြုံ့ပြန်ကြတယ် ဒါပေမယ့် အတိတ်က ပြီးသွားပြီလေ၊ တန်ဖိုးရှိတဲ့ လက်ရှိအချိန်ကို မေ့မြောနေကြရင်း အတိတ်နဲ့ အနာဂတ်ကိုပဲ တွေးတောမျှော်မှန်းနေတာ ဘယ်လောက်နှမြောစရာကောင်းလိုက်လဲ၊ လက်ရှိမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အလှအပတရားတွေကို လျစ်လျူရှုပြီး ပြီးသွားတဲ့ မရောက်သေးတဲ့ အချိန်တွေကို တမ်းတမျှော်မှန်းပူပင်နေကြပြီး ဘယ်လောက်မတန်လိုက်သလဲ…ကိုယ့်ရဲ့ ခံယူချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခြူး ကိုယ့်အပေါ် အဓိပ္ပါယ်ကောက် မှားကောင်းမှားနိုင်ပါတယ်… စောနက ပြခဲ့တဲ့ အိမ်လေးကို ကိုယ် ပုံမှန်စုထားတဲ့ ငွေလေးနဲ့ ဝယ်ပြီးသွားပါပြီ…ခြူးပြောပြောနေတဲ့ အနာဂတ်အတွက် တွေးပူနေမယ့်အစား ယခုအချိန်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသုံးချပြီး ကြိုးစားတာက အနာဂတ်အတွက် ပိုပြီး စိတ်ချရတယ် …လက်ရှိကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တန်ဖိုးထားတာပါ ခြူးရယ်”
သူ့ဆီမှ မမျှော်လင့်သော စကားတွေ ကြားရတော့ သူမ အံ့သြသင့်သွားသည်။ နေကြာပန်းခင်းကြီးကို ကြည့်ရင်း သူ့စကားလုံးတွေကို သူမ ထပ်ခါတလဲလဲ ကြားနေမိသည်။ “မောင့်ကို စိတ်ဆိုးတုန်းပဲလား” ဟု တိုးလျသော လေသံ သဲ့သဲ့လေးကို သူမကြားလိုက်သည်။ သူမ တော်တော်ကြာအောင် ပြန်မဖြေမိ။
သူမ စတင်ပြီး ဘေးပတ်လည်ကို သတိထား ကြည့်လိုက်သည်။ လေအဝှေ့မှာ လှုပ်ခတ်သွားသော နေကြာပန်းပွင့်ချပ်များ၊ ပန်းများအပေါ်တွင် နားနေကာ ဝတ်ရည်ကို စိမ်ပြေနပြေ စုပ်နေသော လိပ်ပြာလေးများ၊ နူးညံ့စွာတိုက်နေသော လေ၏ အထိအတွေ့ ၊အနောက်ဘက်ဆီသို့ ပျံသွားသော ငှက်များ၏ တဖျတ်ဖျတ်တောင်ပံခတ်သံများ..အို..ဒါတွေအားလုံးဟာ တကယ့်ကို ထူးခြားစွာ နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာ ဖြစ်ပျက်နေတာပါကော။ သူမ အရင်လို စိတ်မျိုးနဲ့သာဆို ဒီလိုအရာတွေ ခံစားတတ်မည်မဟုတ်။ အခုဆို သူမ စိတ်ထဲမှာ အတိတ်တွေ အနာဂတ်တွေ မရှိတော့။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် သူမ စိတ်ထဲ၏ ငြိ်မ်းချမ်းမှုကို သူမ ခံစားရသည်။ သူမ သူ့ဘက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ သူက သူမကို တစ်ချက်ကြည့်ရင်း မျက်နှာလွှဲကာ လတ်ဆတ်သောလေကို တယုတယရှုလိုက်သည်။ သူမ သူ့ဆီသို့ ဖြေးညင်းစွာ လျှောက်သွားပြီး သူ့လက်မောင်းပေါ်ကို ခေါင်းလေးမှီကာ
“မောင် …မောင့်ကို စိတ်ဆိုးတာ အတိတ်ကလေ…အခု နေကြာပန်းခင်းကြီးနဲ့ ညနေဆည်းဆာက အရမ်းလှတယ် မောင်ရဲ့ အခုအချိန်လေးတွေကို တန်ဖိုးရှိရှိနဲ့ ကုန်ဆုံးရအောင်နော်”သူမ ချွဲချွဲနွဲ့နွဲ့ ပြောလိုက်သည်။
ချစ်သူနှစ်ဦး၏ ရယ်သံသဲ့သဲ့လေးက လေပြေလေညှင်းနှင့်အတူ နေကြာပန်းလေးတွေကြားဖွဖွလေး ရိုက်ခတ်သွားသည်။
Posted by wa lay at 10:55:00 pm